इतिहास नेपालमा नारी जागरण अवस्था - रमेश गौतम
Monday, 02.04.2013, 06:30pm (GMT5.5)
शान्ति, अग्रगमन र प्रजातन्त्रका लागि समर्पित श्री पुष्पप्रसाद लुइटेलले नेपालका समसामयिक राजनीतिबारे आफ्नो कलम चलाउँदै आउनुभएको छ । लुइटेलजीले नेपालका विभिन्न कालखण्डमा घटेका महत्वपूर्ण घटनाहरूलाई आफ्ना पुस्तको आकारमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ । उहाँका पुस्तकले वर्तमान नागरिक समाजमा हल्लिखल्ली मचाइरहेको छ । उहाँले लेख्नुभएका पुस्तकहरूमध्ये “इतिहास नेपालमा नारी जागरण अवस्था” बारेको यो तेस्रो पुस्तक आफ्नो धर्मपत्नी शान्तादेवी लुईटेलमा समर्पित गर्नुभएको छ । शान्ति एउटा जागृता नारीको रुपमा क्रियाशील हुनुहुन्थ्यो । समाजमा एउटा सरल स्वाभावकी मिलानसार र सहयोगी पनि हुनुहुन्थ्यो । त्यसैले गर्दा वानेश्वर जस्तो शिक्षित समुदायबाट निर्वाचित महिला उपप्रधान पञ्च भएर नारी उत्थानमा ठूलो योगदान पुर्याउनु भएको थियो । यसका साथै महिला संघ, मातृशिशु कल्याण केन्द्र लगायत धेरै ठाउमा सेवा गर्दै आउनुभएको थियो ।
स्व शान्ता लुइटेलले समाजिक क्षेत्रमा पुर्याउनु भएको योगदान धेरै छन् । धर्म संस्कृतिप्रति पनि गहिरो झुकाव थियो । यसका लागि धेरै संघ संस्था मार्फत सहयोग पुर्याउनु भयो । अग्रज नारी जागरणकी अभियन्ताका रुपमा शान्ती लुइटेल हुनुहुन्थ्यो । गत वर्ष आफन्तलाई भेटन अमेरिका जानुहुँदा त्यही विरामी परी स्वास्थ उपचारका क्रममा दिवंगत हुनुभयो । त्यही गहिरो शोकमा पर्नुभएका श्रीमान पुष्पप्रसाद लुइटेलले स्मृति स्वरुप यो पुस्तक लेख्नुभएको छ । यस पुस्तकमा कतिपय ठाँउहरूमा भावुक क्षणहरू देखिएका छन ।
हुन त “इतिहास नेपालमा नारी जागरण अवस्था” नामले नै यो पुस्तक नारी जागरण र सशक्तिकरणको इतिहास झल्कन पुग्दछ । नारीको उत्थान विना व्यक्तिको जीवन निर्माण, समाजको आदर्श निर्माण र राष्ट्रको भाग्य निर्माण सम्भव छैन । अतः नारी चेतना अनिवार्य शर्त हुन आउँदछ । एक्काइसौ शताब्दीको नविन चुनौतीको यो आजको घडीले पनि नारी चेतना र नारी जागरण गराउँदै समाज विकासका हर क्रियाकलापमा सहभागी बनाउन पर्ने कुरामा नै जोड दिएको छ ।
प्रस्तुत पुस्तक घटनाक्रमको वर्णन र तथ्यहरूको संगालोको रुपमा खडा भएको छ । लुइटेलजी एउटा पूर्व प्रशासक र पछिल्लो पाटोमा राजनीतिक दृष्टिकोण लिएर हिंड्नु भएका लेखक हुनुहुन्छ । उहाँले सामाजिक नारी जागरणको समस्या र संकटलाई बडो मार्मिक ढंगले प्रस्तुत गर्नुभएको छ । लेखकले नारी संवेदनालाई उजागर गर्नुभएको छ । यसरी लेखकले मानवीय संवेदनालाई समाजको सामु उभ्याइदिन्छन् पूर्ण चित्र कोरिदिएर जीवनसंग सम्बन्धित सुख–दुःख, घात–प्रतिघात आदिलाई समाज समक्ष प्रस्तुत गरिदिएको छ । लेखकले कुनै पनि वादमा अनुवादित नभई स्वच्छ रुपमा मानवीय जीवनका सूक्ष्म भोगाइहरूलाई मार्मिक ढंगले पुस्तुत गर्नु उसको दायित्व हुन आउँदछ ।
हरेक सफल लेखकले जीवन र जगतको पीडा र व्यथा, कौतुहल, उल्लास, घृणा आदिलाई वटुलीदिएर एकैसाथ समाज सामुन्ने उजागर गराइदिनु पर्दछ । लुइटेलजीले पनि आफ्नो मनले सोचेर राखिएका भावनाहरूलाई आफ्नो कलमको मद्दतवाट विभिन्न कालखण्डका राजनीतिक घटनाका कुरालाई पनि उजागर गर्न खोज्नुभएको छ । लेखकले आफूले देखेको सुनेको र भोगेको अनुभवहरूलाई “इतिहास नेपालमा नारी जागरण अवस्था” नामक पुस्तकको माध्यमबाट प्रस्तुत गर्न खोज्नुभएको छ । यस पुस्तकलाई यस रुपमा ल्याउन लुईटेलजीकी स्व. धर्मपत्नी शान्ता देवी लुइटेल आफ्नो जीवनकालमा गर्नुभएको अथक मेहेनत नै ठूलो प्रेरणाको स्रोत मान्न सकिन्छ । यसैको शेरोफेरोभित्र रहेर लेखकले नारी जागरणलाई उत्प्रेरण समेत जगाउनु खोज्नुभएको छ ।
यद्यपि लेखका कतिपय सकरात्मक पक्ष हुँदाहुँदै पनि लुइटेलजीको लेखनी यदाकदा कांग्रेसप्रतिको नकरात्मक सोच देखिन आउँछ । उहाँले राजा महेन्द्रको कार्यकालमा भएका राष्ट्र, राष्ट्रियता जस्ता सवल पक्षलाई औल्याउन खोज्नु भएको छ भने उनले गरेको प्रजातन्त्रप्रतिको हस्तक्षेपमा मौन रहनुभएको छ । साथै झण्डै दुईतिहाई बहुमतले निर्वाचित सर्वोच्च नेता वि.वि. कोइरालालाई अपदस्त गरेर सत्ता हातमा लिनु अप्रजातान्त्रिक कदम थियो । यस सम्वन्धमा लेखक खुलेका देखिदैनन् । लुइटेलजीले नेपाली कांग्रेसका कतिपय राम्रा नेताहरूको समेत खोट खोजी खोजी उल्लेख गर्नुभएको छ । राजनीतिक इतिहासमा नेपाली कांग्रेसले नै २००७ देखि २०६३ सालसम्मको जनआन्दोलको नेतृत्वलाई सफलता हाँसिल गरेको थियो । २०५२ सालदेखि विद्रोह गर्दैआएका माओवादीलाई समेत शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन नेपाली कांग्रेसले नै सक्रिय पहल गरेको थियो ।
अहिले हरेक क्षेत्रमा राजनीतिकीकरण भएको छ । शायद लेखकलाई पनि कुनै वादले प्रभाव पारेको छ । लेखकमा विद्यार्थीकालदेखि नै वामपन्थी राजनीतिक प्रभाव परेकोले अहिले जीवनको उत्तराद्र्धमा पनि माओवादी विचारबाट प्रभावित भएको वुझिन्छ । लेखकको समग्रमा हेर्दा उहाँको पुस्तक पठनीय देखिन्छ । केही राजनीतिक विचारका अन्तर देखिएको अभिव्यक्ति वाहेक कुरामा पाठकहरूको मनछुने खालका छन । पत्नी वियोगबाट विचलन हुन पुगेका लेखकका हर अभिव्यक्तिका भावनाभित्र पीडा र अन्तर वेदनाहरू बोलिरहेको आभास पनि मिल्दछ ।
नेपालको एउटा कालखण्डकी सशक्त समाजसेवी एवं पञ्चायती राजनीतिकालकी सशक्त कर्मी शान्तादेवी लुइटेलको नारी जागरण र सशक्तिकरणको भुभिका सम्झन लायक छ । उहाँबाट तत्कालीन पछौटे नारी वर्गलाई अघि बढाउन विभिन्न संघ संस्थाहरूका माध्यमवाट प्रयत्न गरेको देखिन्छ । नारी स्वयं उठनुपर्छ र पुरुषहरूको दासताबाट मुक्त हुन आफू स्वयं सचेत हुन यथास्थितिको स्कलिङबाट माथि उठन नारी नै लाग्नुपर्छ भन्ने अभिप्राय पनि यस पुस्तकमा पाइन्छ ।
प्रस्तुत पुस्तकले यथास्थितिवाट समाजको रुपान्तरण हुन सक्तैन र परिवर्तनवादी शक्तिको पहिचान गरी राजनीतिक नेताहरूले शही मार्ग पहिल्याउनु आजको वास्तविकता हो भन्ने सार वताउँछ ।